Pannam Thapa postedatask on Nepali Voice Recognition
Nepali Voice Recognition
Efficient voice recognition in Nepali नेपाली
I have actually clearly listed everything in our group chat as to what the individual is supposed to do. Right now I need voice of at least 100 people with approx. 100 hours of recording to createafunctioning speech recognition system.
Let’s say there isatext of 100 pages and suppose 100 people can read it then I can map their voice to the text
Basically I wanted to check if the system can work. Now that I know it does I need to make it better.
Can you please post Pannam Thapa
The script people should say
Exact length per submission
Best submission format
Here is the script: A total of 32 paragraphs: please make sure it is recorded in
16khz 16bit mono files in MS WAV format
You can speak normally but please make sure you do not skipaword in the provided text. The algorithm depends on the accuracy of transcription (i.e each word should be spoken in the exact order)
I have designed the paragraphs atalength of 15-20 secs
please save each paragraph as 1.wav , 2.wav…32.wav.
भर्खरै संसद्मा पारित संकल्प प्रस्तावको भावना महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई चरितार्थ गर्ने–नगर्ने हामी नेपालीमा निर्भर छ । यस सन्दर्भमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले मलाई छोयो । ‘हामीले आआफ्ना दलीय स्वार्थ र संकुचनभन्दा बाहिर आएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर उठाऔं, त्यसले नयाँ संविधान र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको भावना निर्माण हुन्छ,’ भनी उहाँले भन्नुभएको छ ।
हाम्रा नेताहरूको घैंटोमा घाम लागेको संकेत हो यो । उहाँहरूलाई आ–आफ्नै डम्फु बजाएर देश बन्दैन भन्ने चेतना भएजस्तो छ ।भुइँचालो त औधि विकसित जापानमा पनि आइरहन्छ, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा मात्रै होइन । भूकम्प आइहाले पनि खासै हानि नगर्ने भइसक्यो त्यहाँ ।
घर बनाउने, भूकम्पबाट बच्ने, नोक्सानी घटाउने प्रविधि विकास गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजय एउटा संकट थियो जापानीका लागि । उनीहरूले त्यसलाई टारे । प्राकृतिक संकटहरू अरू थिए, टार्नै नमिल्ने । तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई पनि घटाइसकेका छन् ।
जापान विश्वका अगाडि यति सामथ्र्यवान भएर आज आउन सकेको मूल कारण भनेको ‘हामी जापानी हौं’ भन्ने भावना हो ।यति बेला हामी सबै नेपालीका लागि यस्तै भावना चाहिएको छ । हामीमा सांस्कृतिक विविधता छ । जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिजस्ता विविधताबीच हामीले एकताको सूत्र पहिल्याउन जरुरी छ ।
राईले राईको, धिमालले धिमालको, यादवले यादवको, नेवारले नेवारको, क्षत्रीले क्षत्रीको मात्रै सोच विकास गर्यो भने देश बन्दैन । आआफ्ना जातीय गौरव, विशेषता र संस्कृतिलाई जोगाउँदै यस बेला सबै नेपालीले राष्ट्र बनाउने भावना सिर्जना गर्नु परेको छ । भुइँचालोको नोक्सानीले यो विचारलाई बीजारोपण गरेको छ ।
सारा मानिसको घर भत्किइरहेको छ । मानिसहरू खुला चउरमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । सामूहिक भान्छा चलिरहेको छ । त्यहाँ कोही ठूलो–सानो छैन । सबै मिलेर खाइरहेका छन् । किनभने त्यो नगरी अब सुखै छैन । सबैको एउटै आवाज छ– अब कसो गर्ने ? हाम्रो व्यवस्थाभित्रका कमीकमजोरीहरू यही बेला देखापरिरहेका छन् ।
त्याग र बलिदानका उदाहरण पनि यही बेला रचना भइरहेका छन् ।९० सालको भुइँचालोताका जस्तो नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अलग्गै छैन । राहत आइरहेका छन् । उद्धार भइरहेको छ । हाम्रो प्रशासकीय कमजोरीमात्रै मूल कारक होइन, भौगोलिक दृष्टिले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ राहत पुर्याउन गाह्रो छ ।
जानै त कति गाह्रो छ, राहत लैजान झन् कति गाह्रो छ ? यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीले मरिमेटेर काम गरेका छन् । गाउँगाउँबाट विद्यार्थी राहत बाँड्न पढाइ छाडेर आएका छन् । यो सानो कुरा होइन । यो मातृभूमिप्रतिको भावना हो ।९० सालको भुइँचालोताका हामीसँग नमुनालायक सडक थिएन । असनबाट इन्द्रचोक जाने गल्ली, दायाँबायाँका घरहरू अहिलेकै छाँटका थिए । बस्ती यस्तै किसिमको थियो ।
९० सालपछि भने शासकहरूमा सोच आयो । त्यसले प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका नाममा जुद्ध सडक बन्यो । प्रवेशद्वार, दायाँबायाँ चौडा सडक र पक्की घरहरू बने । टुँडिखेल हुँदै दमकलस्थित जुद्धशमशेरको सालिकसम्म सडक गयो । त्यसको एक चोसो रणमुक्तेश्वर, अर्को चोसो इन्द्रचोक गयो । त्यो भूकम्प नजाँदासम्म काठमाडौं एउटा सहर हो भन्ने कुनै स्वरूप आइसकेको थिएन ।
आज गोरखापत्र संस्थान, नेपाल बैंकको अफिस रहेका ठाउँहरू सबै घोडा बाँध्ने तबेलाहरू थिए । कतै युद्धमा जानुपर्यो भने सामान बोकाउन घोडा नै चाहिन्थ्यो । त्यसैले पालेर राखिएको थियो । नेपाल–तिब्बत युद्धका बेला घोडा र खच्चडले नै ‘लजिस्टिक’ बोकेको हो । भूकम्पपछि तबेला र रिसल्लाहरू बालाजु पुर्याएर व्यवस्थित गरियो । सहरी योजनाले आकार लियो । हो, यसैगरी नयाँ सहरी योजना गर्ने मौका हो, ७२ सालको भूकम्प ।
त्यस बेलाको टुँडिखेल एसियाका ठूलामध्येको परेड मैदान थियो । त्यति राम्रो टुँडिखेलले ९० सालको भुइँचालोका पीडितलाई ओत दियो । त्रिपाल भन्ने शब्दै थिएन । घरमा जे छन्, त्यसैलाई पाल बनाएको हो । महिना दिनसम्म त्यसरी बसेको हो । त्यस्तो उपयोगी टुँडिखेललाई जिविस, नगरपालिकाजस्ता निकायले नै अतिक्रमण गरे ।
सरकारी निकायले खाँदाखाँद गरेर एकै ठाउँमा शान्तिवाटिका, रत्नपार्क, खुलामञ्च, सैनिक मञ्च, सहिद गेट, सैनिक मुख्यालय, आर्मी अफिसर्स क्लब, दशरथ रंगशाला बनाइदिए । त्यसको छेउछाउका सम्पदाहरूमा पनि अतिक्रमण भयो । सुन्धाराका पानी आउने धाराहरूलाई देखादेख बन्द गरियो । यस्तो किन गरियो ? कर्मचारी सञ्चयकोषको शिरमा काठमाडौं मल बसाइयो ।
यस्तो विचारै नगरी काम गर्ने हो ? साँघुरिँदै जाँदा अहिले टुँडिखेलको गति यस्तो भयो ।भृकुटीमण्डप, पर्यटनबोर्ड, सभागृह, क्याम्पसहरूको हालत पनि त्यस्तै छ । पहिले त्यहाँ हरियाली थियो । टुकुचाको फाँटको कुरै नगरुँ । सुन्दैछु, दिसापिसाब गर्ने ठाउँ नपाएर यसपालि मानिसहरूले कष्ट सहनुपर्यो । त्यो बेला त तीन तलासम्म ‘फोर्स’ ले पानी जान्थ्यो । चोभारमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री राखियो ।
त्यत्रो पर्यावरण भएको गोदावरीमा मार्बल उद्योग ल्याइयो । पाटनजस्तो सांस्कृतिक सहरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाइयो । बालाजु, भक्तपुरजस्ता ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइयो । मनमा जे आयो, त्यही गर्ने । बाटो बनाउँदा कसैसँग समन्वय नगरी बनाइयो, ढल बनाउनेले त्यसै गरे । आज बनायो, भोलि भत्कायो । सोच विचार गरेर योजना बनाएको भए त्यो सुन्दरता र खुलापन कायम राख्न सकिन्थ्यो ।
यो महाभूकम्पले नीति बनाउनेका लागि ठन्डा दिमागले सोच्ने मौका दिएको छ । यसबाट सिकिएन भने त्योभन्दा ठूलो दुर्गति भविष्यमा बेहोर्नुपर्नेछ ।राजा महेन्द्रले तीन छोरीहरूलाई दाइजो दिने हुँदा कमलादीको फाँट र जंगल सबै सिध्याए । दिनै परे अन्त कतै दिएको भए हुन्थ्यो । यो त उर्वर खेतीयोग्य जमिन थियो । सबैलाई पुग्ने तरकारी, फलफूल यहीँ फल्थ्यो । श्रीमतीको नाममा रत्नपार्क बनाए ।
त्यो अन्त बनाएको भए हुँदैनथ्यो ? कसैले भन्लान्, यत्रो सहरलाई पार्क चाहिँदैन ? हो, चाहिन्छ । तर सहरकै बीचमा किन चाहियो ? त्यत्रो पर्यावरण नाश गरेर गुजुमुज्ज बस्तीका बीचमा पार्क किन ? अन्त मुलुकमा सैनिकको हेडक्वार्टर सहरभन्दा केही बाहिरै हुन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यसो गरिन्छ । यहाँचाहिं सहरको बीचमा ल्याइयो । सारा टुँडिखेल आर्मीले ‘क्याप्चर’ गरिदियो ।
रंगशाला पनि सहरभन्दा थोरै बाहिरै हुन्छ । केही माइल गएर मनोरञ्जन गरेर फर्कन सकियोस् । यहाँ त जे पायो त्यही गरियो । रंगशालामा दुइटा कमलको फूल फुल्ने सुन्दर पोखरी थिए । त्यो पनि विनाश गरियो । त्यो भएको भए अहिले रानीपोखरीझैं शोभायमान हुन्थ्यो । त्यसैले योजना सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो भविष्यको पुस्ताका लागि हो ।
अब अग्ला घर बनाउँदा पनि युनेस्कोको मान्यतालाई हेर्नुपर्छ । युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा काठमाडौंका सातवटा ठाउँलाई समेटेको छ । पशुपतिनाथ, बौद्ध, स्वयम्भू, चाँगुनारायण, पाटन, काठमाडौं र भक्तपुरका दरबार स्क्वायर यसमा पर्छन् । पाटन कृष्णमन्दिर अरूले बनाएको होइन, स्थानीय नेवारले हो । कुनै बेला यो नेवारको मात्रै हो भन्ने भावना थियो । तर राष्ट्रियताको भावना विकास हुँदै गएपछि त्यो मेची–कालीकै सम्पदा भयो ।
युनेस्कोले विश्व सम्पदा घोषणा गरेपछि त्यो हाम्रोमात्रै भएन, विश्वकै भयो । तिनलाई छेक्ने गरी निर्माण भएका अग्ला भवनहरूले युनेस्कोको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । नक्सा पास गर्ने नगरपालिका र बालुवा दिने जिविसले पनि यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । यिनीहरूले गर्दा सहरको यस्तो हाल भयो । तीन तलाको अनुमति लिएर पाँच तलाका घर बने । कसलाई सोधेर, खुसी तुल्याएर यसरी बनाइयो ?
यसो गर्दै गएमा युनेस्कोले एक दिन विश्वसम्पदा सूचीबाट झिकिदेला । त्यसो भयो भने सम्पदा संरक्षणका लागि आइरहेको सहयोग बन्द हुन्छ । त्यो मापदण्ड पूरा नगर्दा यसअगाडि उनीहरूले तीन वर्षसम्म ‘इन्डेन्जर जोन’ मा राखिदिए । नेपालबाट पटकपटक अनुनय–विनय गरेपछि फेरि सम्पदा सूचीमा पर्न सफल भएका छन्, यी ठाउँहरू । फेरि लापरबाही गरे हाम्रो पर्यटन विकास र सुन्दर सहर निर्माणको मौका गुम्छ ।
धरहरा नष्ट भएकामा जति दु:ख प्रकट गरियो, त्योभन्दा ठूलो सम्पदा त हाम्रा मन्दिरहरू हुन् । मन्दिर र धरहरामा फरक छ । मन्दिर मौलिकता र आफ्नो पहिचान भएको सम्पदा हो, धरहरा होइन । आफ्नै अर्थ, तत्त्व भएका मन्दिर बनाउन आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको छ । धरहरालाई अहिले आएर हामीले आफ्नै सम्पदा मानिदिएको मात्रै हो
त्यसमा न कुनै कला छ, न कुनै मूर्ति छ, न छाना छ, न बुट्टा छ । मौलिकता केही छैन । त्यो त मुसलमानहरूले दिल्लीका कुतुब मिनार शैलीका मिनार बनाएझैं गरूँ न भन्दा आएको नक्कलमात्रै हो । त्यसलाई नेपाललेआफ्नो पुर्खाले बनाएको सम्पदा भनेर दाबी गरेको छैन । खालि हामीले सहरको बीचमा सबैको आँखामा परेको स्तम्भ भनेर मानिदिएको मात्रै हो ।
फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको बिहान बिगुल फुक्न थालेपछि त्यसको महत्त्व झल्किन थाल्यो । देशमा कुनै ठूलो सूचना दिनुपर्यो भने धरहराको टुप्पाबाट बिगुल फुक्ने चलन थियो । सुर्खी र चुन मिसाएर वज्र बनाइएको हो, त्यसैबाट तला थप्दै धरहरा निर्माण गरिएको हो । त्यसलाई बनाउनै परे अब नयाँ ढंगले बनाए हुन्छ । पुरानै शैलीमा नदोहोर्याउँदा पनि हुन्छ । पिलर नै उठाएर बनाउँदा पनि केही हानि छैन ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कलाकृतिचाहिँ मन्दिरहरूमै देखिन्छ । एक नामी पर्यटकले भनेका छन्, ‘आधा विश्व घुमिसक्दा जति पैसा खर्च हुन्छ, भक्तपुरको दरबार स्क्वायर, ५५ झ्याले दरबार र स्वर्णद्वार पुगियो भने सोही बराबरको आनन्द र सन्तोष मिल्छ ।’ त्यो कला अहिले हरायो, मेटियो भने विदेशीहरू हेर्न आउँदैनन् । धर्मभन्दा पनि स्थानीय मानिसहरूको जीवनशैली, वास्तुकला, दर्शनसँग उनीहरू मोहित भएका छन् ।
पचपन्न झ्याले दरबारमा कुनै किलाकाँटा छैनन्, चुकुलैचुकुल लगाएर जोडिएको छ । धन्य, त्यो पनि जोगिएको छ ।महाविपत्तिले आठ हजारभन्दा बढीको जीवन लियो । हजारौं घरबास उठायो । अझै घाइतेहरू छट्पटाइरहेका छन् । खति बेहोरेकाहरूमा अब केही गर्न नसकिने हो कि भन्ने भावना पलाएको छ । तर यी सबै निराशाहरूलाई आशामा बदल्ने राष्ट्रिय सामथ्र्य हाम्रो देशलाई आवश्यक परेको छ ।
यसका लागि एउटा ठूलो सांस्कृतिक क्रान्ति नगरी भएको छैन ।लामो समयदेखि ‘कन्जरभेटिभ’ सोच बोकेर आएको पुस्तालाई अब ब्युँझाउनुपर्ने भएको छ । नाचगान गरेर, गीत सुनाएर, सहभोजन गरेर यस्ता काम गर्न सकिन्छ । हामीले जातपात छैन भनेको कति भयो ? तर व्यवहारमा अझै छ । महाभूकम्पले भने त्यो भावना घटाइदिएको छ । क्षतिका बीचमा यो भूकम्पले जनतालाई ‘रिभोल्युसनाइज’ गरिदियो ।
सामान्य अवस्थामा यस्ता भावनाहरू आउँदैनन् । यस्ता महाविपत्तिले सबैलाई मृत्युको नजिकसम्म पुर्याउँछन् । नयाँ जीवन पाएको अनुभूतिले जागरणको नयाँ संवेदना निर्माण गर्छ । यो महाभूकम्पले बाँचेकाहरूमा जीवनप्रति असीम आशा भरिदिएको छ । क्रान्तिकारी भावना पैदा गरेको छ । यस्तो भावना पैदा गर्ने चीज नै कल्चर हो । खालि मायाप्रीति गाँस्ने कुरामात्रै ‘कल्चर’ होइन ।
अहिले राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । सबैलाई थाहा भएकै हो, एउटा बलियो सरकार र ‘स्टेट्सम्यान’ नहुँदा देशले यस्तो फितलोपन बेहोर्नुपर्यो । यो त सबैथोक देखाउनका लागि जस्तैमात्र भयो । यसो हेर्दा काम खुब भइरहेको छ, तर नतिजा खासै आइरहेको छैन । हुन त यो सरकारमा यत्रो पढे–लेखेका मानिस छन् । लेख्न बोल्न सक्छन् । तर नेतृत्व भन्ने चीज अर्कै हो ।
नेताको व्यक्तित्व, बोलीले नै व्यवहारमा प्रभाव पर्नुपर्छ ।जनतालाई जुरुक जुरुक उठाउन सक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा यसको अभाव छ । त्यसैले संकटको यो बेलामा राष्ट्रिय सरकारको आवाज उठिरहेको छ । कुरा त उठ्यो, तर नेताहरू आफू–आफूमै हराइरहेका छन् । यो महाभूकम्पले विनाशबाट सिक्ने हो भने सबैलाई ‘पोलिटिकल्ली मोटिभेट’ गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
त्यति गर्न सकियो भने भविष्यका सन्ततिहरूका लागि बलियो जग बसालेर जान सकिन्छ । नत्र हामीले जतिदु:ख पायौं, त्योभन्दा नराम्रो क्षति नयाँ पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने छ ।स्वार्थ सबैको हुन्छ । तर राष्ट्रिय स्वार्थका अघिल्तिर अरू सबै साना हुन् भन्ने सत्य हाम्रो नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्यो । नेताहरूको अहिलेको अभिव्यक्ति राम्रै छ । त्यही भावनाअनुसार संविधान पनि बनाउनुपर्छ
सबल नेतृत्वको पहलमा नयाँ नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो जापान र सिंगापुर नेताकै बुद्धिले बनेको हो । सहअस्तित्व सकार्दै सहमतिको बाटोमा हिड्दा ती देशमा विकास भयो । हाम्रोमा भूकम्पले गर्दा हुने कुरा भइहाल्यो, बिग्रने बिग्रिइहाल्यो । सपार्न सकिने कुरा अब सपारौं ।
thanks will push this around